Archive du 20181226
Hentitra i Dada « Hijoro hatramin’ny farany isika »
Miarahaba antsika rehetra nahatratra ny Krismasy, tena faly aho satria nahatratra ity androm-pamonjena ity mariky ny fitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao ka nanomezany ny zanany hamonjy antsika mba tsy hisy ho very izay mino azy,
CENI Madagascar Hamoaka ny voka-pifidianana vonjimaika rahampitso
Vokatra 90% mahery avy amin`ny biraom-pifidianana manerana ny nosy no efa namoahan`ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifiidianana (CENI) ny fironana ary efa nahavoaray 100% ny tatitra an-tsoratra ihany koa ny SRMV
CENI Madagascar Manasa ireo kandida ho filoham-pirenena hiatrika ny fampitahana
Nanao antso avo ireo kandida ho filoham-pirenena niatrika ny fiodinana faharoa ny alatsinainy teo ny avy eo anivon’ny CENI mba hiatrika fampitahana.
Fampitahana ny voka-pifidianana Tokony tohizana, hoy ny CFM
Nety, hoy ny fanazavan’ny filoha lefitry ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy na CFM, Gerard Ramamimampionona, ny fihetsiky ny mpanaradia ny kandida laharana faha 25 raha
Fikambanana RPSH “Tokony manao velirano an-tsoratra izay filoha lany eo “
Naneho ny heviny mahakasika ny fiainam-pirenena ny fikambanana RPSH (Rassemblement pour la Solidarite Humaine) ka nilazany fa samy tsara avokoa ny vinan`ireo kandidà roa nifaninana tamin`ny fihodinana faharoa fa saingy ny manahirana ny vahoaka dia ny fanatanterahana azy ieo,
Fifidianana filoha Mibaribary ny hosoka sy hala-bato
Mangataka ny hampitsaharana ny famoahana valim-pifidianana ataon'ny CENI izay azo sokajiana ho fanakorontanana ny saim-bahoaka ny kandida Marc Ravalomanana sy ny K25 amin’izao fotoana izao satria tsy marina io ary tsy mifanandrify amin'ny zava-misy marina, raha ny fanamarihany.
Mpanohana an-dRavalomanana Nodarohana, noratraina, nampihorohoroana
Sesilany ny fampihorohoana sy ny herisetra nialoha sy nandritra ary taorian’ny fifidianana natao teto amintsika, izay nahalasibatra ny kandida Marc Ravalomanana sy ny mpanohana azy.
Rado Ramparaoelina Tokony hanaovana fampitahana ny vokatra rehetra
Naneho ny heviny mikasika ny voka-pifidianana misy ankehitriny ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Ampitatafika Atsimondrano Rado Ramparaoelina ny alatsinainy lasa teo.
Tranga hafahafa mikasika ny fanomanana ny fifidianana Efa nanomboka tany amin’ny fanisana mpifidy
Tamin'ny fanisan'ny CENI ny mpifidy dia efa hafahafa satria nitombo 1 tapitrisa ny isan'ny mpifidy ary tany amin'ny faritra Atsimo no tena nitombo betsaka. Ity faritra atsimon'ny Nosy ity anefa no efa fantatra mialoha fa ho maro mpifidy ny kandidà 13.
Aza mibitaka aloha e !
Miarahaba anao aho ry Jean ! Tena mbola salama tsara ny tenako ary ianao manao ahoana ?
Airbus A 340 nampidirin-dRajoelina Teren’ny Frantsay handoa 101 tapitrisa dolara ny Airmad
Ny 12 desambra teo no nandeha tao amin’ny Tribonaly ny raharaha mahakasika ny raharaha Air Madagascar, araka ny loharanom-baovaon’ny Jeune Afrique tamin’ny 23 desambra teo. Mitaky volabe 46 tapitrisa dolara fanampin’ny 55 tapitrisa izay misy zana-bola 12 tapitrisa dolara hofana fiaramanidina nampidirin’ny fanjakana tetezamita ny Tribonaly ara-barotra Frantsay, hoy io fampahalalam-baovao io.
Marthe Hervée Nodimandry ny alatsinainy alina teo
Nindaosin’ny fahafatesana tamin’ny alatsinainy 24 desambra tamin’ny 11 alina lasa teo ny filoha namorona ny Radio ara-pilazantsara RVM (Radio Vaovao Mahasoa) 106.8Fm sy ny IMH (Institution Marthe Hervée). Taorian’ny
Akon’ny fetin’ny Noely Mibaribary ny fahantran’ny Malagasy
Niezaka nifaly ny Malagasy na dia hita ho tena sahirana aza tao anatin’ny fetin’ny Krismasy. Nanao izay heriny ny ray aman-dreny nampifaly ny ankizy tamin’ny fividianana akanjo sy ny kilalao.
Fahamaroan`ireo voafonja Handray fepetra ny fonjan`i Tsiafahy
Avo telo heny ny tokony ho izy no isan`ireo voafonja ankehitriny satria miisa 1062 izy ireo amin`izao fotoana izao raha to aka 300 no zaka. 370 amin`izy ireo no miandry fitsarana ary 443 kosa no efa voaheloka mannefa ny saziny.
Andriamirado DAX Tsy nilalao tetsy Mahamasina satria…
Tsy niakatra ny kianjan’i Mahamasina i DAX “Aro Hasina Andriamirado Andrianarimanana”, ilay mpilalao Malagasy milalao ao amin’ny ekipa Afrikana Tatsimo Kaiser Chiefs ny sabotsy 22 desambra 2018
Tsy handefitra ny manana ny rariny
Miandry izay ho valim-pifidianana izany isika izao, na dia efa hita sy efa mazava aza ny havoakan’ny Vaomiera misahana izany dia ny CENI.
MPITANDRO FILAMINANA AO ESIRA
Tsy misy mpitandro ny filaminana sahy mipetraka intsony ao Esira, tanàna izay tena faritra mena amin’ny fanafihan-dahalo.
Nivory maika tsy nisy toy izany ny avy eo anivon’ireo komity mpanohana ny kandida ho filoham-pirenena laharana faha 25, Marc Ravalomanana, ny 24 desambra teo. Araka ny heno dia fanomanana ny paikady entina hanoherana ny tsy fahamarinana miseho eo amin’ny voka-pifidianana no antony.
Hopitalin’ny zaza Tsaralalana Marary 60 nahazo fanampiana
Miisa 60 ireo ankizy marary tsaboina etsy amin’ny hôpitalin’ny zaza etsy Tsaralalana ankehitriny.
Olana ara-pitiavana Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ilay vazaha
Efa teny sahy amin’ny fanaovana heloka mihintsy ny tanora Malagasy ankehitriny, efa tsy misy fanajana ny aina intsony sy efa tsy misy fanajana ny soa tohavina ny maha-malagasy ihany koa; satria sahin’ny ity tovovavy vao 19 taona voalaza
Noely FIFALIANA Ong Ny Sahy Ankizy niisa 468 no nikorana sy nisakafo teny Ilafy
Ankizy latsaky ny 12 taona niisa 468 manana olana amin'ireo raiamandreny misotro toaka, na mandray zava-mahadomelina, avy avy amin'ny faritra : Ambatobe ambony, Ambatobe Ambany, Ambohikely, Mandrosoa,
Antaninarenina Buffet du Jardin Nisitraka fetin’ny Noely ireo sahirana ara-pivelomana
Tahaka ny fanaony isan-taona dia nisitraka fetin’ny Noely tamin’ny alalan’ny fanomezana natolotry ny fianakaviana Eric Kholer tompon’ny toeram-pisakafoana Buffet du Jardin eny Antaninarenina azy ireo ny kilonga sy olon-dehibe sahirana ara-pivelomana nanodidina ny 400 teo ho eo avy amin’ny faritra Antaninarenina, Ambatonakanga,
Lalàna momba ny harena azo tamin`ny tsy ara-drariny Malaina handany ary ireo depiote ?
Na dia efa nampanantsoina fivoriana tsy ara-potoana aza ireo solombavambahoaka dia tsy mbola lany indray ireo volavolan-dalàna momba ny harena azo amin`ny tsy ara-drariny.